दिपेश घिमिरे काठमाडाैं, २२ असार
नेपालमा राम्रो आर्थिक अवस्था र उच्च जीवनस्तर भएका मानिस पनि अमेरिका जान लालायित हुन्छन् त्यसैले केही नेपालीहरु बिजनेस भिसा, डीभी र एक्ट्रअर्डिनरी सिटिजनसिपमा आवेदन दिन्छन् ।
नेपालमै आर्थिक अवस्था राम्रो हुदाँ हुँदै किन अमेरिका जान चाहन्छन् ? धेरैको जबाफ छ, नेपाल सुरक्षित छैन । तर, वास्तविकता फरक छ । नेपालमा भन्दा अमेरिकामा शान्ति सुरक्षा अस्तव्यस्त छ ।
२२ सेप्टेम्बर २०१८ मा अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यमा गोली चल्यो । २६ वर्षीया महिलाले आफैंले काम गर्ने कम्पनीमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेको खुल्यो । यस घटनामा ४१ वर्षीया महिला वृन्दा गिरीसहित अन्य दुईजना मारिए भने ४५ वर्षीय प्रेम आचार्यसहित केही व्यक्ति घाइते भए । परिवारसहित अमेरिका बस्दै आएकी वृन्दाले घटना हुनभन्दा तीन महिनाअगाडि उक्त कम्पनीमा काम गर्न थालेकी थिइन् ।
२१ मार्च २०१९ मा अमेरिकाको केन्टकी राज्यस्थित एलिजावेथ टाउनमा सुवास घले (लमजुङ)सहित दुईजनाको गोली हानेर हत्या गरियो । टी मार्टका सञ्चालक घलेलाई हतियारधारीले मार्टभित्रै पसेर गोली प्रहार गरेका थिए ।
त्यस्तै, द न्युयोर्क टाइम्सले १८ डिसेम्बर २०१८ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार अमेरिकामा सन् २०१७ मा ३९ हजार ७ सय ७३ जना बन्दुक आक्रमणबाट मारिएका थिए । जसमध्ये ६० प्रतिशत आत्मघाती आक्रमण भएको थियो । यसैगरी, सेन्टर फर हेल्थ प्रोग्रेसले सन् २०१८ मा प्रकाशित एक तथ्यांकअनुसार अमेरिकामा हरेक वर्ष ३८ हजार बढी मानिस साना हतियारद्वारा मारिन्छन् । बर्सेनि ८५ हजार बढी मानिस यस्ता साना हतियारबाट घाइते हुन्छन् । अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताले विभिन्न ११ देशमा अध्ययन गरेका थिए । जसमा पछिल्लो १४ वर्षको अवधिमा साना हतियारबाट मृत्यु हुनेको संख्या तुलनात्मक रुपमा हेरिएको थियो । अमेरिकामा साना हतियारबाटै मानिसको हत्या भएको पाइएको थियो ।
अमेरिकी नागरिकलाई बन्दुक किन्न कुनै गाह्रो छैन । उनीहरूले सहजै हातहतियार राख्न लाइसेन्स पाउँछन् । सामान्य ग्रोसरी मार्केटमा बन्दुक बेच्न राखिएको हुन्छ । थरीथरीका बन्दुक किन्न पाइन्छ । यसरी सहज उपलब्ध हुने बन्दुकबाट आत्मसुरक्षा गर्न सहज भएको अमेरिकी सरकारको दाबी छ ।
यद्यपि, गैरअमेरिकी नागरिकले हतियार किन्न पाउँदैनन् । व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि राखिएका हतियारले स्वयं अमेरिकी र गैरअमेरिकीले सुरक्षा चुनौती खेप्नुपरिरहेको छ ।
अमेरिकामा ग्यास स्टेसनमा राति काम गर्नु सबैभन्दा जोखिममध्येको एउटा काम हो । ग्यास स्टेसनमा काम गर्ने नेपाली मूलका कर्मचारी व्यक्तिगत सुरक्षालाई लिएर निकै सशंकित छन् ।
ग्यास स्टेसनमा काम गर्दाको तीतो र भयावह कथा मेरा एक मित्र यसरी सुनाउँछन्,‘पहिलोपटक हतियारधारी प्रवेश गर्दा मलाई जीवनको अन्त्य आज नै हो भन्ने लागेको थियो । दुईजना हतियारधारी हातमा पेस्तोल बोकेर भित्र छिरे । मैले रजिस्टर खोलिदिए र हात उठाएर बसें । उनीहरूले के के बोले राम्रोसँग बुझ्न पनि सकिनँ । अनि उनीहरूले काउन्टर खोले । त्यहाँ भएको पैसा लिए र भागे । म उभिएको उभियै भएँ । म हेरेको हेर्यै भएँ । डरले म बोल्न पनि नसक्ने भएको रहेछु । निकै बेर एकोहोरिएछु । अलि होसमा आएपछि एक बोतल पानी खाएँ । अनि बल्ल अलि आस लाग्यो ।’
अमेरिकामा यो सामान्य घटना हो । दुई सय मिटर पर प्रहरी चौकी भए पनि यस किसिमको लुटपाटका घटना हुने गरेका छन् ।
त्यसपछि उनी केही दिन काममा गएनन् । ‘अरु जे पनि गर्छु । तर, यो ग्यास स्टेसनमा काम गर्दिनँ,’ उनले सोचें । तर, तत्काल अरू विकल्प केही पाएनन् ।
एक–दुई हप्ता काम नगर्ने हो भने अमेरिकामा निम्न वर्गीय आप्रवासीलाई बाँच्न कठिन हुन्छ । अझ निम्नस्तरको काम गर्ने र घण्टा गन्तीमा ज्याला लिनेले त दुई हप्ता काम नगर्ने हो भने खानबस्नै गाह्रो पर्छ ।
उनी तत्काल अर्को विकल्प नपाएपछि फेरि ग्यास स्टेसनमै फर्किए । जान्दा जान्दै फेरि मृत्युसँग पौंठेजोरी खेल्न गए ।
अधिकांश ग्यास स्टेसन अलि एकान्त ठाउँमा हुन्छन् । जहाँ वरिपरि मानवीय बस्ती कम हुन्छ । बस्ती नजिकै भएका ग्यास स्टेसनमा पनि यस्ता घटना बेलाबेलामा घट्छन् । गोली चल्छ । मारिन्छन्, कामदार । तर, घटना रोकथाम तथा नियन्त्रण र अपराधी पक्राउका लागि कुनै काम हुन सकेको छैन ।
ती साथीले करिब चार महिनामा फेरि यस्तै घटनाको सामना गर्नुपर्यो । उनले भने, ‘दोस्रोपटक एकजना मात्र लुटेरा आए । हातमा पेस्तोल बोकेका उनी सरासर भित्र छिरे । पैसा मागे । कुनै शब्द नबोलीकन काउन्टर खोलिदिएँ । ती लुटेराले त्यहाँ भएको पैसा लिएर सरासर बाहिर निस्किए । कुनै हमला गरेनन् ।’
त्यस्तै ती मित्रले तेस्रोपटक पनि लुटेराकै सामना गर्नुपर्यो । अहिले त यस्ता घटना सामान्य लाग्छन्, उनलाई ।
तर यस्ता गोलीकाण्ड अमेरिकाका समाचारपत्रमा स्थान पनि पाउँदैनन् । जसलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ । साना हतियारको निशानामा मूलतः तेस्रो विश्वबाट अमेरिका भित्रिएका र सामान्यस्तरको काम गर्नेहरु बढी परिरहेका छन् ।
‘अमेरिका सुरक्षित छ भन्ने कुरा सुन्दा मलाई अचम्म लाग्छ,’ ती साथीले भने, ‘नेपालमा एउटा हत्या भयो भने कत्रो चर्चा र बहसको विषय बन्छ । निर्मला हत्याकाण्डले राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्यो । तर, अमेरिकामा यस्ता घटना त दिनदिनै भइरहन्छन् । कसैलाई केही मतलब हुन्न । कसैलाई केही वास्ता हुन्न । नेपालमा सडकमा कुकुर मर्नु र यहाँ हामी जस्ता तेस्रो विश्वबाट आएका मर्नुमा केहि भिन्नता छैन ।’
अमेरिकामा ग्यास स्टेसन मात्र असुरक्षित होइन । अन्यत्र पनि खासै सुरक्षा छैन । साना हतियार हरेक अमेरिकी नागरिकसँग छन् । त्यस्तो हतियार बोकेर हिँड्न उनीहरुलाई अधिकार छ । कतिपयले कार्यस्थलमै पनि हतियार बोकेर जान्छन् । जता जाँदा पनि उनीहरुसँग हतियार हुन सक्छ । सानोभन्दा सानो कुरामै उनीहरुले हतियार प्रहार गर्न सक्छन् । कुनै ठूलो विषयमा विवाद हुनै पर्दैन । अर्कै प्रसंग तथा सवालमा रिस उठिरहेको छ भने विद्यालयका कलिला बालबालिकामाथि आक्रमण भएको प्रशस्त घटना छन् ।
अमेरिकामा हरेक वर्ष करिब ४० हजारको हाराहारीमा साना हतियारबाट मानिसको मृत्यु हुँदै आइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै नीति छैन । जम्मा ३ हजार मान्छे मारिएका न्युयोर्कका ट्वीन्स टावरमाथि आक्रमण हुँदा त्यसले संसारभर हंगामा मच्चियो । आतंंकवादलाई परास्त गर्न संसार एक भयो । इराक खण्डहर बन्यो । अफगानिस्तान खण्डहर बन्यो । सिरिया बलिरहेको छ । तर, यही अमेरिकामा हरेक वर्ष त्योभन्दा कैयांै गुणा बढी साना हतियारबाट मान्छे मारिँदा पनि त्यो कुनै आमचासो र सरोकारको विषय बन्दैन । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कसैको ध्यान गएको देखिन्न ।
अमेरिकालाई सुरक्षित ठानेर नेपाल छाड्न खोज्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । तर, अमेरिका नेपालभन्दा सुरक्षित छैन । यहाँका ग्यास स्टेसन मात्र होइन, टी मार्ट सञ्चालन गरी आफ्नै बिजनेस गरिरहेका सुभास घलेसमेत मारिए । भौतिक सुरक्षा नेपालमा जति अमेरिकामा छैन । अन्धाधुन्ध बाँडिएका साना हतियारले संसारकै सबैभन्दा जोखिमयुक्त देश अमेरिका बनेको छ ।
तर, यस्ता घटना कहिल्यै चर्चामा आउँदैनन् । यहाँका समाचारपत्रले यस्ता समाचार खासै छाप्दैनन् । यहाँका मूलधारका पत्रपत्रिकाले अमेरिकाको यो अँध्यारो पक्षमा खासै चर्चा परिचर्चा गर्दैनन् । त्यसैले अविकसित तथा अल्पविकसित देशका मानिसलाई यहाँको अँध्यारो पक्षबारे खासै जानकारी पनि हुँदैन ।
अमेरिकालाई सुरक्षित ठानेर आउनेलाई राम्रोसँग सोचेर मात्र पाइला चाल्न ती साथीको सल्लाह छ । नेपालमा कुनै व्यक्तिले सामान्य धम्की दियो भने पनि त्यसमाथि कारबाही हुन सक्छ । तर, यहाँ गोली हानेर हिँड्दा पनि त्यस्ता मानिस विरलै समातिन्छन् । अपराधीलाई समातेर पनि के हुन्छ र आफ्नो ज्यान नै गइसकेपछि ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २३, २०७६, ०४:४५:००
कोरोनामा कांग्रेसले पत्याएका १५ विचौलिया/दलाल
विपद्‌मा भ्रष्टाचार: कहाँ खर्च भयो ८० करोड ?
काठमाडौंंले बदल्नुपर्ने सोच
अबको विकल्प कल्याणकारी लोकतन्त्र